सुकीदहको आन्दोलनले जनतालाई मार नपार । – रोल्पा समाचार
२०७४ माघ १३, शनिबार १४:५३ गते
सुकीदहको आन्दोलनले जनतालाई मार नपार ।
रोल्पा समाचारदाता on २०७४ माघ १३, शनिबार १४:५३ गते
रोल्पा समाचार साप्ताहिकमा २०७४ माघ १३ गते आइतबार प्रकाशित
स्थानीयतह सञ्चालन निर्देशका २०७४ अनुसार सुकिदह गाउँपालिका कार्यालय रोल्पाले गाउँपालिका नाम दंगादेव गाउँपालिका र गाउँपालिका केन्द्र गाउँपालिकाको २ नं वडाको सानधारामा बनाउने निर्णय गाउँपालिकाबाट पारित गरेपछि आन्दोलन भइरहेको छ । यो आन्दोलनले जनताहरु मारमा परेका छन् । कहिलेसम्म जनता फेरी मारमा पर्ने ?
गाउँसभाबाट निर्णय पारित भएपछि संघर्ष समितिले गाउँपालिका कार्यालयमा ताला वन्द सहित आन्दोलन अगाडी बढाएका छ । सुकिदह गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिर्वतनको विरोधमा नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसका स्थानीयतहको निर्वाचनको समयमा पराजित दुबै उम्मेदवारले संघर्ष समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अहिले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र संघर्ष समितिको बीच आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । सुकीदह गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र नाम परिवर्तनको विषयमा गाउँपालिका र संघर्ष समिति बीचमा दुरी बढेको छ । गाउँपलिकाको निर्णय सुकीदहबाट ‘गंगादेव गाउँपालिका र केन्द्र गाउँपलिका–२ नं वडाको सानधारा’मा बनाउने निर्णयको फाइल र संघर्ष समिति माग ‘गाउँपालिकाको नाम सुकिदह गाउँपालिका र गाउँपालिकाको केन्द्र सुकओडार’को फाइल मन्त्रालयमा पठाएर मन्त्रालयको जुन फाइलको निर्णयलाई स्वीकृत गरेको निर्णयलाई गाउँपालिका र संघर्ष समितिले स्वीकार्ने सहमति भए पनि तनावमुक्त हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाको आफ्नो निर्णय मैै अडान र संघर्ष समितिले त्यो सहमतिलाई उल्टाउँदै गाउँपालिकाले गरेको निर्णयलाई प्ुनः उल्टाउने माग राख्दै आएको छ । तर गाउँपलिकाले कानुनी आधार निर्णय गरेकोले मन्त्रालयको निर्णयको पर्खाइमा नै छ । निर्णय उल्टाउने माग सहित संघर्ष समितिले गाउँपलिकाको कार्यालयमा पुनः माघ ७ गतेबाट ताला वन्द गरेको छ । जसले गर्दा गाउँपालिकाबासी सहज रुपमा सेवा पाउनबाट बञ्चित बनेका छन् । गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला वन्दसँगै गाउँपलिकाका जनप्रतिनिधिले जनताको सेवाबाट बञ्चित नबाउने भन्दै आवश्यक कागजात झोलामा नै बोक्नु पर्ने बाध्यता भएको छ भने गाउँपालिकाकाका जनप्रतिनिधिलाई गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र लगायतका विषयमा नकरात्मक टिका टिप्णी बढेको छ । कानुनी आधारमा गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तनको निर्णयको विषयमा नै जनप्रतिनिधिलाई अफल बनाउने रणनीति नै हो । यो एउटा राजनीतिक र प्रक्रियागत लडाई लड्ने बेलामा बन्द, हड्तालमा उत्रिनु राम्रो भने होइन । जनताको जनमतबाट पारित भएको निर्णयलाई किन नस्वीकार्ने ? भन्ने आम प्रश्न समेत उठेको छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्नुभन्दा पहिला त्यो निर्णय जनताके पक्षमा छ कि छैन भने पुर्नर विचारको अपरिहार्यता हो । तर जनप्रतिनिधिले निर्णय गरेको निर्णय प्रति विरोधको नामबाट गाउँपालिकाबसी र गाउँपालिकालाई वन्दक बनाउने अधिकार कसैको छैन । हामी उदाहरणको निम्ति ५ नं प्रदेशको अस्थायी मुकाम निर्धारणलार्य राम्रारी हेर्न सक्छौ । जनप्रतिनिधिको जनमतबाट पारित भएको निर्णयलाई स्वीकार्ने सँस्कारको विकास गर्न आवश्यकता छ । त्यो निर्णय अजम्बरी होइन पुनः पाँच वर्षपछि सो निर्णय बहुमतको आधार उल्टाउन समेत सकिन्छ । जनताको निम्ति काम गर्ने जनप्रतिनिधि कुनै निर्णय पारित गर्नुभन्दा पहिले जनताको पक्षमा त्यो निर्णय छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यता हो । भने जनप्रतिनिधिले प्रतिपक्षलाई कहिल्यै पनि जनताको निम्ति भनेर राजनीतिक पूर्वाग्राहिको आधारमा आन्दोलन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुभएन । जनप्रतिनिधिले जनमतबाट पारित गरेको निर्णयको विरोधमा राजनीतिक स्वार्थमा आन्दोलन पनि गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
जनता दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधि बिहीन अवस्थामा सर्वदलिय भाग बन्दाको आधारमा राजनीतिक सर्वदलिय समयन्त्रबाट आगाडी बढेको मानसिकतालाई सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले अन्त्य गर्न आवश्यकता छ । राजनीतिक भाग बन्दा र राजनीतिक शक्तिको आधारमा आम जनताको निम्ति प्रभावकारी रुपमा विकास गर्र्ने बेला विभिन्न नाममा आन्दोन गर्नु आफ्नै निम्ति घाटा हो । अब जनप्रतिनिधि र प्रतिपक्ष राजनीतिकदलका सबै कार्यकर्ताले विकासमा जोड आवश्यकता छ । यो एउटा कानूनी प्रक्रिया हो । एउटा नीति विधिले ह गर्दछ । अब जनप्रतिनिधिले पनि जनमतको उचित कदर गर्दै जनताको पक्षमा निर्णय ध्यान पु¥याउुन प¥यो । राजनीतिकदलहरु र गाउँपालिकाको आन्दोलनले जनतालाई कहिलेसम्म सास्ती ? जनतालाई नाममा होइन काममा परिणाम दिन सबै सुकिदहबासी एक जुत हुनु पर्दछ होइन भने राजनीतिक खिचातानीले सबैलाई नोक्सान गर्नेछ ।
पहिलो पटक झिनुवामा गाडी पुग्ने भयो ।
बजार अनुगमन नहुनुमा लिबाङका व्यवसायिहरुले के भन्दछन् ? जिल्ला सबै व्यवसायीहरुको पसलहरु अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७४ आश्विन २८, शनिबार १३:५७ गते २०७४ आश्विन २८, शनिबार १४:५९ गते
गणपति स्टोर लिबाङ रोल्पा प्रोपाइटर बैकुण्ठ श्रेष्ठ विगत समयमा बजार अनुगमन जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरु आउनु हुन्थ्यो । त्यस बेला आम व्यवसायी...
जीवन एक जाती अनेक
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७७ कार्तिक ६, बिहीबार ०२:०० गते
लक्ष्मण तङ्नामी मगर साधारणतया जीवन भनेको जन्मेदेखी मृत्युसम्मको अवधीलाई नै भन्ने गरिन्छ र कसै–कसैले भगवानको उपहार सम्झेका छन जीवन भने कसैले...
कोरोना विरुद्धमा सारा नेपालीलाई एकताबद्ध हुन प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वान
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७६ चैत्र २५, मंगलवार १५:१३ गते
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको संक्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथामका सम्बन्धमा राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधन पूर्णपाठ २५ चैत २०७६...
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७३ चैत्र २६, शनिबार १५:४८ गते
नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको संविधानमा व्यवस्था अनुसारको वर्गिय, लैङ्गीक, जातीय, सीमान्तकृत लोपउन्मख समाबेशी सहभागितालाई केही नीतिगत व्यवस्था...
सबैको सहयोगबाट अब दिलबहादुरलाई जेलमुक्त बनाउँछाँै ।
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७५ असार १६, शनिबार १५:१२ गते २०७५ असार १६, शनिबार १५:१४ गते
नरेन्द्र जिसी संयोजक रोल्पाली सेवा समाज साउदी वैदेशिक रोजगारको शिलसिलमा साउदी अरबमा पुगेका रोल्पालीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रोल्पाली सेवा समाज...
गोली लागेर एक महिला गम्भीर घाईते
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७७ माघ ६, मंगलवार १४:४९ गते
नेपालकै राष्ट्रिय दलित संग्रालय रोल्पामा बन्दै
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७७ पुष २८, मंगलवार ०३:४२ गते